UMGANGATHO-Chapman Technology Co., Ltd.
Ukwaneliseka kwabaThengi yinjongo yethu ephambili!
Ukusuka kwimbono ukuya kwimveliso, sizinikezele kulwaneliseko lwabathengi bethu kwinto nganye ehanjisiweyo kunye nenkonzo nganye ebonelelweyo. I-ISO yethu: Izatifikethi ezingama-9001 zimele ngaphezulu kokubhaliswa ziiarhente zokuqinisekisa; yinkcubeko eqhutywa yinkqubo esemgangathweni yenkqubo kunye nophuculo oluqhubekayo. Sizimisele ukubonelela ngezixhobo ezixabisekileyo ngelixa siqhubeka sizicela umngeni ekuphuculeni umgangatho weemetrikhi zethu ukugqitha kulindelo lwabathengi bethu kuzo zonke iimveliso ezintsha kunye / okanye iinkqubo zelifa.
Umgaqo-nkqubo wethu Wobulunga “kukunyaniseka nokugcina umthetho; Itekhnoloji Umgangatho ophezulu kunye nokusebenza kakuhle; UMthengi ubeka phambili izinto zakhe ”. Ukunyaniseka ngumphefumlo wenkampani yethu. Sijonge ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo ngokusebenza okuphezulu kumthengi wethu. Ukoneliseka kwabathengi yeyona njongo yethu iphambili. Ngeli xesha, ukuzibophelela kwethu ekuthobeleni umthetho kunika ukhuseleko olukhulu kwinkampani yethu.
Ulawulo lwethu loMgangatho luqukethe izinto ezine eziphambili: Inkqubo yoMgangatho, uCwangciso loMgangatho, uLawulo loMgangatho kunye nokuphuculwa koMgangatho. Sinezixhobo zokulinganisa ezihambele phambili nezichanekileyo kunye nesoftware yokulawula umgangatho ukuze kuqinisekiswe ulawulo lomgangatho olusebenzayo.
Uhlalutyo lwexabiso kuyilo lwemveliso kunye nenqanaba lophuhliso
Iinjongo zomgangatho Isicwangciso soMgangatho weProjekthi
Imo yokuSilela kuYilo kunye noHlalutyo lweZiphumo
Inkqubo yokuSilela kweNdlela yokuSilela kunye noHlolo lweZiphumo
INkqubo yokuVunywa kweCandelo leMveliso
Ulawulo loMgangatho woMthengisi
Ulawulo lomgangatho wokutya
Ulawulo Umgangatho ephumayo
Uhlalutyo lwexabiso / Ixabiso leMveliso yobunjineli
Izixhobo zokulinganisa eziphambili